Denitration la isticmaalayo technology denitration Allena
daaweynta denitrification ayaa la sameeyaa iyadoo la isticmaalayo technology denitrification oxidative ee u taagoo firfircoon (Allena) ah si ay u gaaraan bartilmaameed u ah heerarka warshadu hawada NOx. Isla mar ahaantaana, arrimaha saamaynta fiirsashada oxygen, heerkulka biyaha qaboojinta iyo isbedelka load kuleeliyaha la falanqeeyay. Natiijooyinku waxay muujisay in marka cadaadiska adsorption iyo cadaadis desorption of matoorka oxygen VPSA ahaayeen 40-48 KPA iyo -45-55 KPA, fiirsashada oxygen gaadhay qiimaha fiicnayn in ka badan 92%. Qaboojinta heerkulka biyaha waa in aanay ka badan 32 ° C. Isla mar ahaantaa, waxaa la soo jeediyay in warshadu hawada NOx had iyo jeer waa in la raacayo gacanta ku taranta of kursiga keydka si loo daboolo isbedel load kuleeliyaha.
Iyada oo saarid ah "Plan Action for hortagga iyo xakameynta Hawada wasakhowga hawada" oo hoos u sii of warshadu hawada ku of sunta gaaska qiiqa ka kululeeyaha dhuxul-rasaas, gacanta ugu xabagta nitrogen NOx ayaa sii hagaagtay. SCR hadda waa nooc ka mid ah technology denitrification la hufnaan ugu waxtarka badan ee ka saarista. Si kastaba ha ahaatee, markii raad goolka of hoose warshadu hawada NOx, technology this ka dhigi doonaa warqada ammonia xad-dhaaf ah ay sabab u qodan soo jireenka ah oo beerta socodka sinnayn. Isla mar ahaantaana, sida Hannaan loading kordhay, heerka qaab beddelidda ee SO2 in SO3 kordhay, iyo qiiqa final Hodanka fiirsashada of NH3 iyo SO3 in gaaska sii xumeeyaan doonaa arrimha dibada ee preheater hawada. The technology denitrification oxidative ku saleysan heerkulka hooseeyo u taagoo firfircoon waa mid aad u wanaagsan si looga fogaado dhibaatooyinka kor ku xusan. Kala duwan ka SCRs, taagoo firfircoon (sida O3) waa geedi socodka loogu daweeyo hammiga of gaaska qiiqa baxay iyada oo lagu qayilo ee sunta ah sida NO iyo macdanaha culus. Hawlgalkani waxa uu leeyahay waxba kuma laha nooca kuleeliyaha, shayga daaweynta waa gaaska dabada ee kuleyliyaha, qayilo ee NO iyo macdanaha culus ee gaaska qiiqa in NOx iyo biraha qiimaha-sare oxides, ka dibna isu-duwidda ee sunta ah sida NOx, SO2, iyo macdanaha culus. Ka saar.
In warqad this, technology denitration oxidative firfircoon waxaa loo isticmaalaa in lagu baran gacanta warshadu hawada NOx in gaaska qiiqa dhuxul-rasaas, iyo arrimaha saameeya oolnimada denitration sida fiirsashada oxygen, qaboojinta heerkulka biyaha iyo isbedelka load kuleeliyaha la falanqeeyay.
1, loo horumariyo barnaamijka
kuleyliyaha asalka ah ee warshad koronto ah waa 2 nooc oo 35t / h iyo 1 set of 50t / h silsilad foornada. nidaamka desulfurization qoyan asalka isticmaalaa set oo ah habka gypsum nuuradda qaadidda SO2. The technology denitration oxidative kelli firfircoon waxaa laga codsadaa in qiiqa dabada ka dib kulanka gaaska qiiqa. Sidaa darteed, kaliya heerka socodka gaaska iyo nitrogen content ee xabagta qiiqa ee qiiqa dabada u baahan tahay in la tixgeliyo, kaas oo ka madax bannaan yahay hab sari ee kuleyliyaha ah. Isticmaalka qalabka desulfurization asalka ah, oo kaliya desulfurization gaaska qiiqa tubada munaaraddii qiiqa asalka ahaa modified iyo nuclear-kelli firfircoon lagu rakibay. Inta kale ee transformations ku jira hindisooyin cusub sida ku cad Jaantuska 1. Nidaamka ogsijiin, nidaamka kelli firfircoon, habka biyo qaboojinta iyo korontada iyo qalab xakameeyo nidaamka kaabayaal ah. nidaamka oxygen wuxuu isticmaalaa adsorbent ah in la kala saaro oxygen iyo nitrogen hawada by adsorption iyo desorption in ay soo saaraan uruuray sare ee ogsijiin. Ka dib markii pressurization, deoiling, iyo ka saarista ciidda, oxygen galo matoor kelli firfircoon, iyo ugu dambeyntii Britain firfircoon (O3) ahbaa iyada dheecaanku ka qayb qolladdii dheecaanku ka daadanayo. dheecaan ah ee korontada a high-voltage in oxygen ee qolkii dheecaanku abuuraa xaddi weyn oo kulaylka, sidaas biyo qaboojinta dibadda ayaa loo baahan yahay si loo kululeeyo-daaweeyo qolkii dheecaanku in ay kor u fiirsashada of Britain firfircoon (O3).